Izandi zaseMarlborough ezisecaleni kolwandle.
Kwindawo yomlingo kunye nefenitshala epheleleyo, ikhabhathi yesitudiyo inegumbi lokuhlambela eligcweleyo, ibhedi yokumkanikazi kunye nedesika yayo yabucala, ubumfihlo kunye nemibono ebalaseleyo phezu kweSandi saseMahau. Qubha unqumla indlela, hamba elunxwemeni okanye kumzila wamahlathi. Mamela ukuntyiloza kweentaka uze uhlolisise. Hamba ematyholweni ebusuku ukuze ubone le ntshulube. Abantu abaninzi banqwenela ukuba bebebhukishe ezi-2 okanye ngaphezulu!
Kumgangatho ogqunyiweyo kukho iWebber BBQ onokuthi kuyo wenze i-BBQ, ubhake, uyiqhole okanye ubilise imbiza. Ngaphakathi kwendawo yebhentshi kukho zonke izitya, izixhobo zokucheba njl.njl ezifunekayo kuquka imbiza nepani kunye nepani yombane, itoaster kunye nejagi. I-microwave inokubilisa okanye ikupheke ukutya. Imiyalelo ikwikhabhathi.
Sihlala kwi-3/4 yeehektare zemihlaba enengca, igadi yeziqhamo kunye nemifuno ejonge eMahau Sound. Kukho ukuqaliswa kolwandle kwizikhephe ezingaphaya kwendlela kwaye onke amaza aqubha elunxwemeni. Sinohambo lwethu lokuhamba kwihlathi leNative ukuya kwitanki yethu yamanzi okanye ukubona intshulube ebusuku. Kukho iindlela ezininzi zokuhamba ngaphakathi kokufikelela ngokulula ngakumbi kwindlela yokuhamba yaseQueen Charlotte. Yonwabela inzolo, jonga iintaka kwaye wonwabele iimbono ezihlala zitshintsha.
Izandi zaseMarlborough zezinye zamatye anqabileyo eNew Zealands iindawo ezininzi ezimangalisayo. Isinye kwisihlanu okanye unxweme lwaseNew Zealand lukwiZandi. Ungachitha ixesha elininzi apha kwaye ubone iqhezu layo. Zininzi iilwandle ezithandekayo kunye neenduli onokuziphonononga kwaye usuka eHavelock ungenza ukhenketho olwahlukeneyo, uhambo lokuloba okanye ukubona iZandi kwisikhephe seposi sasekhaya. Zininzi iindlela zokuhamba kunye neengoma zebhayisekile zeentaba kule ndawo. Okanye ungathanda ukwenza uhambo losuku ukutyelela iindawo zewayini zalapha ekhaya, ukubona imyuziyam yenqwelomoya yaseOmaka okanye undwendwele iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide okanye uqubhe kwindawo yomlambo iPelorus Bridge.
Kusivuyisa kakhulu ukwabelana nabanye ngolwazi lwethu ngendawo kunye neNew Zealand. Kodwa ukuba unqwenela ukuba nemfihlo kulungile ngokunjalo.